Izindaba - TIG welding sheet metal: ilungele ukushisela amashidi amancane
TIG welding sheet metal: ilungele ukushisela amashidi amancane
I-TIG yokushisela ifaneleka ngokukhethekile ukushisela insimbi yeshidi elincane futhi ingasetshenziselwa kokubili okuqhubekayo nokushisela indawo.Funda kabanzi mayelana nezici zayo.
I-TIG (Tungsten Inert Gas) yeshidi lensimbi yokushisela ngokuqinisekile ingenye yezindlela ezivame kakhulu zokushisela.Lokhu kuyi-inqubo ye-arc welding ene-infusible(i-tungsten)i-electrode,ivikelwe igesi ye-inert(amagesi asetshenziswa kakhulu yi-argon noma i-helium), engenziwa ngensimbi yokugcwalisa noma ngaphandle kwayo.
I-TIG welding ifaneleka ngokukhethekilewelding mncane sheet metalfuthi ingasetshenziselwa kokubili okuqhubekayo kanye nokushisela indawo.Lobu buchwepheshe bokushisela ekuqaleni benzelwe imboni yezokundiza phakathi neMpi Yezwe Yesibili, ukuze esikhundleni sama-rivets kufakwe amashisela ezindizeni (alula kakhulu anokumelana okufanayo).Kusukela lapho, ukusetshenziswa kwayo emkhakheni wezimboni kuye kwanda kakhulu.
TIG welding sheet metal inikezaizinga eliphezulu amalungafuthi ngakho-ke ifaneleka ngokukhethekile ukushisela amashidi amancane, ngokungafani nendlela yendabuko yokushisela lapho ingozi yokubhoboza insimbi iphezulu.
I-TIG (Tungsten Inert Gas) Ukushisela kuvame ukusetshenziselwa ukushisela izingcezu ezincane zensimbi engagqwali nezinsimbi ezingenayo insimbi njenge-aluminium, i-magnesium, nama-alloys ethusi.
Inqubo ye-welding ehlukahlukene enemiphumela ephakeme kakhulu
Inqubo eyinkimbinkimbi idinga izinga eliphezulu lekhono
Inqubo yokushisela kancane kodwa enembe kakhulu;ikhiqiza i-weld ebukeka kahle kakhulu
Ingakhiqiza ama-welds akhohlisayo, afana namajika ayindilinga noma angu-S
Isebenza kanjani i-TIG welding sheet metal
Ku-TIG welding, impahla inikezwangesandlangosizo lwebhanoma ngokuzenzakalelayongocingo olucijile.Le nqubo ifaneleka ukwenza izinga eliphezulu lokushisela uma kwenzekaukuhlanganisa ugqinsi oluncane lwensimbi engagqwalingokuncibilikisa imiphetho, ngokungezwa okuncane kwezinto (kwezinye izimo ngisho nangaphandle kwezinto zokugcwalisa).
KuyaTIG weld amashidi azacile, aithoshiisetshenziswa lapho kufakwa khona i-electrode ye-tungsten, lapho igesi ye-inert evikelayo igeleza kubhavu lokuncibilika.Umsebenzisi uhambisa ithoshi endaweni ehlangeneukuhambisa ukugeza okuncibilika, ukubeka i-electrode ye-tungsten engenakufinyeleleka ebangeni eliphakeme lamamilimitha ambalwa futhiukugcina leli banga lizinzile.
Ngesikhathi sokusebenza kubaluleke kakhulu ukuvimbela i-electrode ukuthi ingathintani ngqo nocezu oluzoshiselwa, ngoba induku ye-tungsten izonamathela ekuhlanganyeleni futhi imise ukushisela.
I-Thyhmetalfab: iphoyinti lakho lereferensi ye-TIG yokushisela insimbi yeshidi elincanyana
Le nqubo yokushisela amashidi iyisixazululo esihle kakhulu sokuthola imiphumela ngaphandle kwama-burrs, kodwa kuthathaopharetha abakhethekile kakhulu, ikakhulukazi uma kuziwa ekuphatheni amashidi amancane, ukuthola isimo se-TIG sokushisela.
KwaMinifaber thinaTIG weld sheet metal endlini, endaweni evikelekile nelawulwayo, ngaleyo ndlela kuthuthukisa izikhathi nezindleko zokwakhiwa kwemikhiqizo eyinkimbinkimbi, eqediwe noma eqedwe kancane.
Umshini wethu wokubaleka uhlanganisa irobhothi lokushisela le-MIG-TIG anthropomorphic kanyeImishini yokushisela eyi-8 ekhetheke ngokuphelele ku-TIG, esikhiqiza ngayo yomibili imikhiqizo esesigayiwe kanye neqediwe enenani eliphakeme elingeziwe.